IMoz Pro: Ukwenza Okuphelele Ku-SEO | Martech Zone
Ukusebenza Kwezinjini Zokucinga (SEO) yinkambu eyinkimbinkimbi futhi eqhubeka njalo. Izici ezinjengokushintsha kwe-algorithms yeGoogle, izitayela ezintsha, futhi, muva nje, umthelela wobhadane wokuthi abantu bayisesha kanjani imikhiqizo nezinsizakalo kwenza kube nzima ukubeka isu elilodwa le-SEO. Amabhizinisi kuye kwadingeka akhulise ubukhona bawo bewebhu ngokuphawulekayo ukuze ahluke emncintiswaneni futhi insimu enezikhukhula iyinkinga kubathengisi.
Njengoba kunezixazululo eziningi ze-SaaS laphaya, kunzima ukukhetha nokukhetha ukuthi yiziphi okufanelekile nokuthi iziphi ezishisa imbobo ephaketheni lakho lokumaketha. Ukwenza okuningi kucebo lakho lokumaketha online - kanye nesabelomali salo - kuyadingeka ukuze uhlale usebenza. Ngamamethrikhi amaningi nezici ezahlukahlukene okufanele uzicabangele lapho umaketha ku-inthanethi, ungalahleka kudatha nokuchichima kwesisombululo sokushumayeza isoftware ngezixazululo ezithile.
IMoz Pro yakhiwe ngobuningi bokusebenza, ukusetshenziswa okulula, nekhwalithi yedatha engqondweni ukusiza abathengisi ukuthi bahlunge idatha eyinkimbinkimbi ye-SEO nesoftware ukufeza okuningi ohlwini lwakho lwewebhu, amawebhusayithi, nesabelomali.
Ukufinyelela okulula kwedatha yekhwalithi
Ama-backlinks anquma kahle igunya lesiza sakho. Zibonisa inani nokuxhumana futhi zingasiza iwebhusayithi yakho ukuthi ikleliswe phezulu kuma-SERP. A isifundo esenziwe yiPerficient muva nje uphethe ngokuthi iMoz ibinenkomba yedatha yokuxhumanisa enkulu kunazo zonke, ama-90% ngaphezu kwesibili ngobukhulu. Amathuluzi owasebenzisayo angayithinta kakhulu impumelelo yakho ku-SEO, futhi idatha eningi onayo ingcono kakhulu ongayenza.
Izixhumanisi ezinokwethenjelwa lapho zikhomba emuva kusayithi lakho, kuba lula kakhulu ukuthi amakhasimende ayithole. IMoz Pro ilinganisela kahle ama-backlink esiza sawo onke ekhasini lakho futhi ikhombisa ukuthi yikuphi okumele kugcinwe noma kukhishwe njengogaxekile.
Iphinde ihlukanise izizinda ngezixhumanisi zakho, ikubonise izixhumanisi eziningi ezivela ezizindeni eziningi kunokuxhumanisa okuphindaphindiwe kusuka kwesinye. Le yimethrikhi enamandla kakhulu yochwepheshe be-SEO njengoba inikeza ukumelwa okunembe ngokwengeziwe kobukhona bakho bewebhu. Futhi, amamethrikhi we-Moz's Domain Authority ne-Page Authority asiza ukukala amandla wanoma iyiphi iwebhusayithi noma ikhasi kanye nokufana kokukhipha abanye kuma-SERP.
Izici zeMoz Pro ziyahlukahluka futhi zifinyelela kabanzi. I-interface, noma kunjalo, ilawula imisebenzi yayo eminingi ngomklamo olula, ohlanjululwe.
Ukuchofoza okubili yilokho okudingayo ngokuyisisekelo kunoma iliphi iphuzu ledatha elihlobene ne-SEO ongalifuna. Izici zekhasi, amakhodi wesimo se-HTTP, amamethrikhi wokuxhumanisa, umaka we-schema, ubunzima begama elingukhiye… konke kukuchofoze kabili kuphela!
Logan Ray, Uchwepheshe Wezokukhangisa Ngedijithali ku Beacon
Idizayini yethebhu efinyelelekayo yenzelwe ukusiza yonke i-SEO kanye nochwepheshe bezentengiso, ngaphandle kwesipiliyoni. Amathuluzi afana ne-Keyword Explorer asebenza ngokubambisana nokwenziwa kwekhasi, ekhombisa ukuthi amakhasi akho abalwa kanjani phakathi kwabancintisana nalapho ungakhuphula khona amazinga wakho we-SERP.
Ungathola ukuhlolwa kwesayithi, ukwenziwa kwegama elingukhiye, amazinga, ukuhlaziywa kwe-backlink nokuningi, konke endaweni eyodwa. Ukuba nesicelo esisodwa kuphela sezinkinga eziningi kuyazikhokhela. Esikhundleni sokusebenzisa - ngaleyo ndlela uthenge - izinhlelo zokusebenza eziningi ukwenza imisebenzi ehlukile, ungonga isikhathi nemali ngesisombululo esihlanganiswe ngokuphelele, esisodwa.
Wethula inqubekela phambili yeqembu lakho
Izibalo eziminyene namagrafu kungahle kube wusizo kuma-veteran we-SEO, kepha idatha eningi kakhulu iyabacindezela abaningi. Amagama angukhiye, i-Domain Authority, ukukhasa isiza, nokuningi - ukwethula ukunqoba noma ukulahlekelwa kwe-SEO enkampanini yakho kuyacindezela, noma ngabe ochwepheshe abangewona ama-SEO baqonda amatemu. IMoz Pro isebenza ukukhipha idatha eyinkimbinkimbi futhi yenze kube lula ukuqonda ukuthi izixhumanisi zakho namawebhusayithi aqhuba kanjani ngokumelene nomncintiswano.
Njengoba umsebenzi wakho wokukhangisa ubandakanya ukwethula okutholile, ucwaningo, nokunqoba, iMoz Pro ifaka isoftware yayo yombiko wangokwezifiso.
Isici semibiko yangokwezifiso sisinikeza idatha esiyidingayo ukuze sithethelele amaphrojekthi namasu ethu… futhi siletha ukubonakala okukhulu embonini yethu.
UJason Nurmi, umphathi wezokumaketha kwa I-Zillow
Ngokucaca okuthuthukile, amashadi agayekayo kalula, nezinye izinsiza ezibonakalayo, ukusebenza kwemibiko yangokwezifiso ye-Moz Pro kungenzeka kusize ukuxhumana ngezinjongo zakho nezidingo zakho ngempumelelo enkulu.
IMoz ibihamba phambili kwi-SEO kuzinguquko eziningi zezinjini zokusesha. Omakadebona nabasanda kufika ngokufanayo bazothola imisebenzi abayithandayo ngamaphakheji nezici ezahlukahlukene zeMoz Pro ngenkathi begcina ulwazi lwakamuva ngamathrendi nezinguquko ezintsha ze-SEO.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala seMoz Pro
Tags: ama-backlinksigunya lesikhuluAmagama angukhiyemoz pronekhonoukusebenzisa ngokugcwele injiniseoseo yesikhulumi
Izibonelo Ezi-3 Ezinamandla Zokuthi Ungayisebenzisa Kanjani I-Mobile App Beacon Technology ukukhulisa Ukuthengisa Okuthengiswayo